E-4C1 ○ Sariirta waxaa loo dhaqaajin karaa si siman markii labada durdur dherer leh la isku habeyn karo isla isla markaana si otomaatig ah ayaa loo xiri karaa marka si buuxda loogu riixo labada wejiye oo ku qalabaysan aaladda badbaadada. Istaraatiijiyadu waxay xaqiijisaa in ubucu horay usocdo si toos ah. Of Labada masraxa iyo xirmooyinka dhinacba waxay ka samaysan yihiin qalab muuqaal ah oo loo yaqaan 'HDPE' oo qaabeeya hal mar. Rest Backrest waxaa xukumaa guga kaaliyaha gaaska. Adjust Hagaajinta dhererka waxaa socodsiiya cabitaanka. Tors Dia.150mm dhuxusha leh bartamaha l ...
E-3C1 ○ Labada masraxa iyo xirmooyinka dhinaceeda waxaa laga sameeyay walxo HDPE ah oo loo qaabeeyey mar keliya. Backrest waxaa xukumaa guga auxilialy guga. Backrest waxaa xukumaa guga auxilialy guga. Tors 50150mm karsatayaasha leh nidaamka qufulka dhexe. Tors 50150mm karsatayaasha leh nidaamka qufulka dhexe.
E-8 A1 ○ Qalabka ugu weyn ee fidiyaha oo lagu qalabeeyay laba laab soo qaadida iyo dhismooyinka tuubbooyinka hydraulic-ka oo wata shay la muujiyay. Lo Nidaamka qufulka bartamaha iyo istaraatiijiyada isweydaarsiga waxay ka dhigaan isweydaarsiga si joogto ah, ugu kalsoonaan karo oo khafiif ah. ○ Fududeeyuhu wuxuu leeyahay hawlo hooseeya, Trendelenburg iyo dhanka kale Trendelenburg oo ay maamusho faseexada labada dhinac ee isweydaha. Rear Dhabarka gadaasha fidsan ayaa leh balooga dhexe ee xirxiran, daboolka hoose ...
Qaabka E-8 A2 Qaab dhismeedka 1. Nidaamka biriiga korantada: Waxaa lagu rakibay afar bareega dhinacyada dhan sariirta ka dhigaya biriiga meesha ugu fiican wax ku ool ah iyo conveninal). Isticmaalidda alaabada dusha laga keeno ee leh beerin tayo sare leh ayaa ka dhigaysa biriiga mid aad u dabacsan cimriguna waa sii dheeraanayaa. 2.Taageerada qalabka -Maqtiinka: Qalabka taageerada wuxuu gelin karaa kormeeraha sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa madax-weyne si looga hortago qulqulka shilka ee bukaanka. 3.Push Handle: Yaraynta culeyska shaqada iyo ka hortagga ...
E-8 A3-heerka qaabeynta 1. Nidaamka bareega dhexe: Waxaa lagu qalabeeyay afar bareega dhinacyada dhan sariirta ka dhigaya biriiga meesha ugu fiican si hufan oo ku habboon. U adeegsiga dekedayaasha alaabada la soo dejiyo oo leh tayo tayo sare leh ayaa biriiga ka dhigaysa mid jajaban oo cimri dherer dheer. 2.Taageeraha qalabka -Maqtiinka: Qalabka taageerada wuxuu gelin karaa kormeeraha waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa madaxa-madaxa si looga hortago qulqulka shilka ee bukaanka. 3.Push Gacanta: Yaraynta culeyska shaqada iyo ka hortagga ...